Waa maxay Aqoonsiga Habka Sharuuda Alxanka Qaadeynta (U-Qalmitaanka Nidaamka Alxanka, oo loo yaqaan WPQ) waa habka imtixaanka iyo qiimeynta natiijada ee lagu xaqiijinayo sax ahaanta nidaamka alxanka alxanka la soo jeediyay. U qalmida nidaamka alxanka waa miisaam muhiim ah ...
Meelaha Codsiga ee alxanka otomaatiga ah Horumarinta dhaqaalaha, dadku waxay si sii kordheysa ugu tiirsan yihiin baahida tamarta. Gaadiidka dhuunta waa hab muhiim u ah gaadiidka tamarta. Waa ammaan iyo dhaqaale sidaa darteedna si ballaaran ayaa loo isticmaalay. The a ...
Waa isbeddel mustaqbalka dhismaha dhuumaha caqliga leh inay adeegsadaan mashiinnada alxanka dhuumaha oo dhan otomaatig ah. Isbeddelka shuruudaha dhammaystiran ee mashiinka alxanka dhuumaha oo dhan ayaa iska cad. Alxanka gebi ahaanba otomaatiga ah ee alxanka dhab ahaan dareenka ...
Hordhac Mashiinka Alxanka Mashiinka Tooska ah
Alxanka otomaatiga ah waxaa loogu yeeraa alxamida dhuumaha oo dhan otomaatig ah. Waxaa loo adeegsadaa marka dhuumaha birta ah la hagaajiyo, madaxa alxanka wuxuu ku wareegaa hareeraha tuubbada birta, isagoo xaqiiqsanaya alxanka dhammaan-booska ee dhuumaha si qotodheer, taagan iyo kor ah. Tan ...
Xulista Habka Alxanka
Habka quudinta silig si toos ah alxanka dhuumaha: Hufnaan la'aanta quudinta siliggu waxay si toos ah u saameysaa tayada alxanka. Hababka quudinta siligga waxaa si fudud loogu qaybin karaa laba siyaabood: sawir silig ah iyo fiilo riixid. Marka siligga la jiido, qoryaha alxanka ayaa ku dhow meesha lagu rakibayo siligga ...
Qalabka Mashiinka Mashiinka La Qaadan Karo Oo La Qaadan Karo
Hindisaha dhuumaha oo dhan mashiinka alxanka otomaatiga ah wuxuu ogaadaa alxanka aan cidi wadin wuxuuna xalliyaa dhibaatada ah in dhuumaha dhuumaha kiimikada kiimikada gacanta aan lagu xiri karin. Magnetic oo dhan booska mashiinka alxanka dhuumaha otomaatiga ah waa nooc ka mid ah otomaatiga ...
Xaaladda Hadda iyo Isbedelada Alxanka Tooska ah
Xaaladda Iminka iyo Isbeddellada Qalabka alxanka otomaatigga ah ee saliidda guryaha iyo gaaska bixinta biyaha kaamerada gaaska iyo warshadaha kale ee dhuumaha ayaa loo isticmaali karaa alxanka fidinta tubbada, alxanka toosan, alxanka jiifka ah, alxanka kore, alxamida buuxisa iyo dabool w ...
Maxay Yihiin Hababka Alxanka Loo Wada Isticmaalaa Ee Dhex Marinta Masaafada Dheer
Maxay Yihiin Hababka Alxanka ee Loo Wada Adeegsado Mashiinka Mideynta Masaafada Dheer Hada, qaababka rakibaadda iyo alxanka ee inta badan la isticmaalo ee dhuumaha masaafada dheer ee guriga iyo dibaddaba inta badan waxaa ka mid ah alxanka qaansada elektarooniga ah, alxanka tungsten argon arc arc, iyo dhalaalida iyo gaaska gaashaaman a ...
Saameynta Xawaaraha Alxanka ee sameynta Alxanka
Waxaa qoray admin on 21-03-05
Saameynta Xawaaraha Alxanka ee Abuurista Alxanka Dhuumaha mashiinka alxanka oo dhan-booska oo dhan oo ay soo saarto Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd. wuxuu qaataa hagaajinta dhuumaha iyo gurguurashada madaxa madaxa ee alxanka si loo ogaado alxanka oo dhan (5G alxanka) Dhuumaha. Waxaan ...
Mashiinka GMAW / FCAW ee alxanka otomatiga ah
GMAW / FCAW PIPELINE WELDING WELDING Farsamaynta iyo otomaatiggu waxay noqdeen mawduucyo kulul maanta bulshada dhexdeeda, waxayna sidoo kale yihiin isbeddel lama huraan ah oo horumarka bulshada ah. Dhuxusha otomaatiga ah ee dhuunta waa tiknoolajiyada dhismaha ee alxanka oo awood u siineysa dhammaan ...
Waa maxay xoojinta alxanka ugu fiican? Ma ka sarreeya ayaa ka sii fiican?
E1 & e2 sawirka soo socda micnaheedu waa xoojinta alxanka. Dhererka dheeriga ah looma baahna oo keliya habka alxanka, laakiin sidoo kale wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay howlaha nabdoon ee markabka, gaar ahaan nolosha daalka. Saamaynta alxanka maraakiibta cadaadisku inta badan waa alxamid dhowr-baas (su ...
Nidaamka caadiga ah ee alxanka ISO iyo EN
Marka loo eego qaybta gudaha ee ISO / TC44, dejinta iyo dib u eegista heerarkeeda alxanka ayaa si gaar ah mas'uul uga ah guddi-hoosaad kasta (SC). Kala soocida walxaha caadiga ah waxaa asal ahaan loo qaybiyaa 9 qaybood iyadoo loo raacayo dalabka: materials Qalabka alxanka, (SC3); Tijaabi ...